laacib » Harry Kane v Mohamed Salah – Kumaa Ah Weeraryahanka Fiican, Kumaa Ayaana Ku Riyaaqaya Xilli Ciyaareed Fiican Ka Hor Kulankooda Wembley?
Harry Kane v Mohamed Salah – Kumaa Ah Weeraryahanka Fiican, Kumaa Ayaana Ku Riyaaqaya Xilli Ciyaareed Fiican Ka Hor Kulankooda Wembley?
Labadii xiddig ee ugu goolasha badnaa Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Mohamed Salah iyo Harry Kane ayaa iska horimaanaya kulanka Wembley Stadium duhurnimada Sabtida.
Kane iyo Salah ayaa kala dhantaalay Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, iyadoo Xiddiga Spurs uu sii watay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa halka boqorka Masar uu dad badan ka yaabsaday.
Laakiin ka hor kulankooda isbuucaan, kumaa ah weeraryahanka fiican, kumaa ayaana ku riyaaqaya xilli ciyaareed fiican?
Kane xilli ciyaareedkan waxa uu celcelis ahaan gool dhalinayaan 179 daqiiqo kasta, halka uu xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu gool dhaliyay celcelis ahaan 96.4 daqiiqo kasta tartamada oo dhan.
Wadar ahaan tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kabtanka England waxa uu gool dhalinayay celcelis ahaan 102.5 daqiiqo kasta.
Xilli ciyaareedkan Mohamed Salah waxa uu gooldhalinayaa 169 daqiiqo kasta.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 44kii gool ee uu dhaliyay waxa ay u dhigantay inuu gooldhaliyay 93.6 daqiiqo kasta uu dheelay. Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore waxa ay la micno tahay inuu gool dhaliyay 96.9 daqiiqo kasta uu dheelay.
Kane ayaa ugu danbeyn jabiyay inkaartii ka heysatay inuu gool dhaliyo bisha Agoosto horyaalka Premier League isagoo labo gooldhaliyay xilli ciyaareedkan kulan ay Tottenham 3-1 kaga badisay Fulham iyo kulankii furitaanka ee ay 3-0 ku garaaceen Manchester United.
Waxa ay taasi wadar ahaan goolashiisa tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore ee tartamada oo dhan ay ka dhigeysaa 43 gool.
Salah ayaa isna sidoo kale labo gool dhaliyay afartii kulan ee ugu horeysay ee Premier League xilli ciyaareedkan: Kulankii furitaanka ee ay 4-0 kaga badiyeen West Ham iyo goolka qura ee kulankii ay Liverpool 1-0 kaga badisay Brighton.
Tan iyo markii uu goolashiisa aan kala joogsiga laheyn bilaabay bilowgii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay xiddiga Masar waxa uu dhaliyay wadar ahaan 46 gool.
Labada ciyaaryahan waxa ay ka qeyb qaateen Koobka Adduunka laakiin rikoorkooda xilli ciyaareedkan waa mid isku mid ah.
Kane waxa uu ku soo bilowday afarta kulan isagoo ciyaaray 358 daqiiqo waxaana la bedelay daqiiqada ugu danbeysa labo jeer. Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Kane waxa uu wadar ahaan dheelay 3,953 daqiiqo.
Salah waxa uu isna sidoo kale ku soo bilowday afar kulan isagoo la bedelay labo jeer, waxaana uu ciyaaray 338 daqiiqo.
Xilli ciyaareedkii hore oo uu Liverpool ka caawiyay inay gaarto finalka Champions League, waxa uu xiddiga Masar dheelay 4,122 daqiiqo.